Izintambo Zasentshonalanga Emhlabeni Wonke
I-Geography Geography Physical
by I-Katy Rudolphy
Izintambo Zesihlabathi Zitholakala Emhlabeni Wonke
Ifomu lezintandane zeSandani ezinye zezindawo ezihlaba umxhwele kakhulu futhi ezinamandla emhlabeni. Iziqu zomhlabathi ngamunye (okusanhlamvu) ziqoqa kokubili kokuhamba kwamanzi nomoya (oolian), inqubo ebizwa ngokuthi usawoti. I-saltating i-granules ngayinye yakha i-transversely (perpendicular) kuya ekuqondisweni kwemoya okwenza iziqu ezincane. Njengoba ama-granules amaningi eqoqa, ifomu lezintunda. Amadonsa aseSand angafumba kunoma iyiphi i-landscape eMhlabeni, hhayi nje amahlane.
Ukubunjwa kwezidumbu zeSand
Isihlabathi ngokwalo luhlobo lwezinhlayiya zenhlabathi. Ubukhulu bayo obukhulu bubangela ukuhamba okusheshayo nokukhuphuka okukhulu. Lapho ama-granules eqoqa, enza ama-dunes ngaphansi kwezimo ezilandelayo:
1. Amagundane aqoqa endaweni engenazo izimila.
2. Kumele kube khona umoya owanele wokuhambisa ama-granules.
3. Ama-granules azogcina ehlala emigqumeni nasezintabeni ezinkulu uma ziqoqa ngokumelene nesithintelo esiqinile emoyeni, njengezimila noma amadwala.
Izingxenye zeDun Dune
Yonke imifula yasemhlabathini ine-windward (stoss) emathafeni, i-crest, i-slipface ne-slope leeward. I-stoss eceleni kwe-dune iyaphambana nomoya ohamba phambili. Ukugcoba isihlabathi se-sandwich kuhambela umthamo we-leeward, uhamba kancane njengoba uqoqa ezinye izigulane. I-slipface yakha ngqo ngaphansi kwe-crest (ukuphakama kwesidumbu se-sandune), lapho ama-granules afinyelela ukuphakama kwawo okuphezulu futhi aqale ukuwela kancane kancane phansi kwe-leeward.
Izinhlobo zezingqimba zeSand
Amadonsa asetsheni we-Crescent, nawo obizwa ngokuthi i-barchan noma e-transverse, yiwobunjwa bomhlabathi we-dune ovamile kunazo zonke emhlabeni. Bakha ngendlela efanayo nemimoya eyinhloko futhi bane-slipface eyodwa. Njengoba zibanzi kunokuba zide zingakwazi ukuhamba ngokushesha kakhulu.
Amadonsa angama-line aqondile futhi ajwayele ukufana nemigqa ehambisanayo.
Ukuguqula izintundane kubangelwa ukuthungwa kwesihlabathi esithinta umoya ophendulela isiqondiso. Izintambo zenkanyezi ziyi-pyramid futhi zinezinhlangothi ezintathu noma ngaphezulu. Izintambo zingabuye zibe nezintuthwane ezincane zezinhlobo ezahlukene, okuthiwa izintambo eziyinkimbinkimbi.
I-Grand Erg Oriental yase-Algeria ingolwandle olukhulu kunawo wonke lwamaduna emhlabeni. Lesi sabelo sehlane elikhulu laseSahara lihlanganisa amakhilomitha angaphezu kuka-140,00 endaweni. Lezi zintambo eziningana kakhulu zihamba ngasenyakatho-eningizimu, nezintumbane eziyinkimbinkimbi endaweni.
Amadonsa odumile asempumalanga e-Great Sand Dune National Park eningizimu yeColorado akhiwa esigodini esivela embhedeni wasendulo. Izihlabathi eziningi zahlala endaweni ngemuva kokuba leli chibi liphule. Imimoya eminyene yavuthela izihlabathi ezisedolobheni laseSangre de Cristo eliseduzane. Iziphepho zomoya zashaya ngaphesheya kwezintaba zibhekela esigodini, zenza ukuba izintunda zikhule ngokuma. Lokhu kwaholela ezinqabeni zehlabathi ezisemuva kunazo zonke eNyakatho Melika ezingaphezu kwamamitha angu-750.
Amakhilomitha angamakhulu amaningana enyakatho nasempumalanga ahlala emagqumeni aseNebraska. Iningi lasentshonalanga ne-Nebraska elisemaphandleni lihlanganiswa nalezi zintandane zasendulo ezihamba phambili, ezishiywe kusukela lapho i-Rocky Mountains zakha khona. Ezolimo kungaba nzima ngakho ukugubha isisetshenziswa esikhulu kunazo zonke endaweni.
Imfuyo idla lezi ziqhingi ezivundile kakhulu. Amagquma ase-sandle aphawulekayo njengoba asisiza ukwakha i- Ogallala Aquifer , ehlinzeka ngamanzi amaningi eNthafeni Elikhulu naseNyakatho Melika. Inhlabathi eyisihlabathi esinomhlabathi ovuthayo iqoqa amakhulu eminyaka yemvula ne-glacial meltwater, eyasiza ekwakheni i-aquifer enkulu engahlanjululwa. Namuhla izinhlangano ezifana neSandhills Task Force zizama ukulondoloza izinsiza zamanzi kule ndawo.
Abavakashi kanye nezakhamuzi zedolobha elikhulu laseMidwest elikhulu lingavakashela i-Indiana Dunes National Lakeshore, eceleni kwesigodi saseLake Michigan, cishe ngehora eliseningizimu-mpumalanga yeChicago. Izintandane kulezi zikhangiso ezithandwayo zenzeke lapho iWisconsin glacier yakha iLake Michigan eminyakeni engaphezu kwengu-11 000 eyedlule. Izitshalo ezishiywe ngemuva zadala imifula njengamanje i-glacier enkulu encibilikisiwe ngesikhathi seWisconsin Ice Age.
INtaba iBaldy, i-dune ende kunazo zonke epaki empeleni ibuyela eningizimu ngezinga elingamamitha amane ngonyaka ngoba lide kakhulu kunezitshalo ukuze liyibeke endaweni. Loluhlobo lwe-dune luyaziwa ngokuthi i-freedune.
Amadunduma aseSandeni atholakala emhlabeni wonke, ngezinhlobo ezihlukahlukene zezimo. Ngokuvamile, yonke i-dune yesihlabathi idalwa ngokusebenzelana komoya nomhlabathi ngesimo sezinhlamvu zehlabathi.
Zingaki Amazwe Ase-Afrika Ahlelwa Ngaphandle Kwendawo?
Amazwe Alala KuMeridian Prime
Ama-Tornadoes abulalayo ase-United States
I-Belize Barrier Reef
I-Geography yamaPhuzu aphezulu e-United States
12 AmaLwandle asePacific Ocean
AmaTayipi Emhlaba noma amaTide Emhlabeni
I-Link Between Biomes and Climate
I-Geography yeNyakatho Yezwe Elisha
Gubha usuku lokuzalwa kukaDkt. Seuss neKlasi lakho
Yeka Indlela Yokugaya Igesi Noma I-Nitrous Oxide Works
Ukusetshenziswa Kweningi NgesiNgisi
I-College Scholarships Ngama-Dead Deadlines
Umthandazo WamaKristu Wokubonga
Izingoma eziphezulu ze-10 ze-Adele Zonke Zesikhathi
I-'II 'ishiwo kanjani ngesiFulentshi?
Indlela Yokufunda Izinhlelo Zendlu
Umlando weCube kaRubik
Ngubani ohlabelela ingoma yobuKristu "kuze kube phakade?"
Ukushayela i-Black Mesa: i-Oklahoma High Point
All About Americana Umculo
I-Backhand Sidespin Serve - Izibhebhe eziyisisekelo zeThebula Tennis / Ping-Pong
Amathiphu 5 Wokubhala Incwadi Yobumba Esebenzayo
Okushiwo ngamafutha kuDashibhodi yakho
I-Michelle Wie Glamor Shots
Ngaphambi kokuthenga isikebhe - Khetha ubukhulu obufanele
Isingeniso Sokuphrinta Okuhle Kokuphrinta Ubuciko
Izihloko Zezingxoxo Eziphezulu Zezingxoxo Eziyisi-10 Zengxoxo
Isimo se-Molarity Inkinga
I-Ultimate, Definitive Pool Movie List
Isibonelo Sokwama Lewis
2012 WWE PPV Imiphumela & Recaps
Ukuqhathanisa isenzo esingajwayelekile sesiFulentshi 'Ukufunda' ('ukufunda')